In Man United Ay Weli Tartanka Horyaalka Ku Jirto, Booqashadiisii Juventus, Eden Hazard Iyo Waxyaabihii Kale Uu Antonio Conte Kaga Hadlay Shirkiisa Jaraa’id Ee Maanta | Gabiley Media
February 10, 2017 - Written by media news
HR(GMN)Tababaraha kooxda hogaanka u heysa horyaalka Ingariiska ee Chelsea Antonio Conte ayaa goordhow shir jaraa’id ku qabtay xarunta tababarka kooxdiisa ka hor kulanka ay la ciyaarayaan kooxda Burnley, waxaana uu durbadiiba ka hadlay sida ay kooxda Burnley ugu xoogan tahay gurigooda xilli ciyaareedkan.
“Waa hubaal waxa ay noqon doontaa kulan aad u adag. Burnley waxa ay 28 dhibcood ka heshay kulamada ay gurigooda ku ciyaareen, waxaana ay hal dhibic kaliya ka heshay kulamadii ay martida ahaayeen. Waxa ay badiyeen shantii kulan ee ugu danbeysay, waxa ay goolal badan dhaliyeen dhamaad ciyaaraha.
“Xogta la hayo waxa ay muujineysaa inay aad ugu xoogan yihiin gurigooda. Waxa ay kaalinta 3aad ka soo galayaan horyaalka haddii la xisaabiyo dhibcaha kulamada guriga. Waa inaan feejignaan weyn u yeelano.
“Waxa ay doonayaan inay na garaacaan madaama aan nahay kooxda horyaalka hogaaminetsa. Waxaan isagu diyaarinay kulankaan si weyn.”
Conte waxa uu sidoo kale ka hadlay cadaadis ay leedahay inay hogaanka u hayaan horyaalka Premier League
“Waxaan qabaa ilaa iyo dhamaadka xilli ciyaareedka inaan ku noolaan doono cadaadiska ceynkaan ah. Cadaadiska mar walba waa isku mid, haddii koox kula xafiiltameysa ay badiso waxa ay soo yareynayaan farqiga, haddii ay badin waayaan waxaad heysataa fursad aad dhibco badan ku hesho.
“Waa muhim kulanka aan la ciyaareyno Burnley. Haddii war wanaagsan uu ka yimaado koox kale markaas waan faraxsanaan doonaa. Laakiin anaga kaliya ayaa isku tashaneyna.”
Isagoo ka hadlayay tartanka horyaalka, waxa uu yiri:
“Daacadii waxaan qabaa in lix kooxood oo aad u xoogan inay ku dagaalamayaan koobka horyaalka.
“Haa, Manchester United xitaa waa ay ku jirtaa. Waxa ay heystaan ciyaartoy fiican, waana inaan taas ogaano.
“Haddii aan ku fekerno inaan heysano sagaal dhibcood oo aan ku dhow nahay hanashada horyaalka, markaas waa qalad aad u weyn. 14 kulan ayaa harsan. Waxaa jira shan kooxood oo Chelsea ay lix ku tahay oo ku guuleysan kara horyaalka.
“Waa muhim inaan qalad weyn la sameynin tartankaan.”
Isagoo ka hadlayay booqashadii uu isbuucaan ku tagay Juventus, waxa uu yiri:
“Waxa ay kaliya aheyd baashaan sababtoo ah waxaan ahaa mid nasanayay ka dib isbuuc adag.